2021 Summer Institute - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Zakwamanye Amazwe
Usuku: Juni 14-18, 2021
Ukubuka konke kohlelo
Lesi sikhungo sehlobo se-IWCA salo nyaka singafingqwa ngamagama amane: okubonakalayo, komhlaba wonke, ukuguquguquka, nokutholakala Sijoyine ngesikhungo sokuqala sehlobo sasehlobo saseJuni 14-18, 2021! I-SI ngokwesiko isikhathi sokuthi abantu basuke osukwini nosuku baqoqane njengeqoqo, futhi ngenkathi izinga obalekela ngalo usuku nosuku kukuwe, iqembu lalo nyaka lizokujabulela ithuba lokuxhuma cishe nabasebenza esikhungweni sokubhala emhlabeni wonke. Yonke imihlangano yokucobelelana ngolwazi izobanjelwa ngeplatifomu yokusebenzisana, yokusakaza bukhoma futhi izotholakala ukuze iqedelwe ngokuzwana. Ngokwengeziwe, ngenxa yezindleko eziphansi zokubamba i-SI cishe, ukubhaliswa kungama- $ 400 kuphela (imvamisa, ukubhaliswa kungama- $ 900), okwenza iSI yalo nyaka ibe ngeyezomnotho kakhulu okwamanje. Njengaseminyakeni edlule, ababambiqhaza bangathembela kokuhlangenwe nakho kufaka phakathi inhlanganisela yokuphana yama-workshops, isikhathi sephrojekthi esizimele, ukuqeqeshwa komuntu ngamunye neqembu elincane, ukuxhuma namalungu eqembu, nokudlala okunenjongo. Imininingwane yesheduli ezayo.
Isikhathi sokugcina sokubhalisa: Ephreli 23rd e iwcamembers.org. Ukubhalisa kunqunyelwe kumalungu okuqala angama-40 afaka isicelo.
Imali Yokubhalisa: $ 400.
Izimali uSizoIzibonelelo ezilinganiselwe ziyatholakala kumalungu afaka isicelo ngo-Ephreli 23 futhi akhombisa izidingo zawo.
Ukubuyiswa inqubomgomoIzimbuyiselo ezigcwele zizotholakala kuze kufike ezinsukwini ezingama-30 ngaphambi komcimbi (Meyi 14), futhi ingxenye yembuyiselo izotholakala kuze kufike ezinsukwini eziyi-15 ngaphambi komcimbi (Meyi 30). Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzotholakala ngemuva kwalelo phuzu.
Sicela uthumele imibuzo nge-imeyili ku UKelsey Hixson-Bowles or UJoseph Cheatle.
UKelsey Hixson-Bowles (Utah Valley University) usebenze ezikhungweni zokubhala iminyaka eyishumi nanye, eqala njengomfundisi we-undergraduate peer tutor. Manje usenguMsizi kaProfesa Wezincwadi Nokuqanjwa kanye ne-Faculty Director ye-Utah Valley University (UVU) Writing Center. UKelsey ungummeleli wombuso wase-Utah ebhodini le-RMWCA futhi usebenze ebhodini le-MAWCA kanye nomhleli wabafundi Ukubuyekezwa Kontanga. Izintshisekelo zakhe zocwaningo zifaka phakathi izifundo zokubhala zesikhungo, ukudluliswa kokufunda, ukuthanda ukubhala, nobulungiswa bezenhlalo ezindaweni zokubhala nasekubhaleni amakilasi. Izincwadi zakamuva zifaka phakathi "Ukufundisa abafundisi: Ukuzikhandla kanye nobudlelwano phakathi kokufundisa nokubhala," (Sifundisa Njani Abafundisi Bokubhala: A WLN Ukuqoqwa Okuhleliwe Kwedijithali) futhi “Ukuzethemba kakhulu noma ukungazethembi ngokwanele? Isifinyezo esilinganiselwe sokubhala kokubhalwa kwabafundisi kanye nokufundisa ukuzisebenza, ”(I-Praxis: Ijenali Yesikhungo Sokubhala). UKelsey uthole i-Ph.D. Yakhe. kusuka e-Indiana University of Pennsylvania kanye ne-MA yakhe ne-BA yakhe evela eKansas State University. Ngaphandle kwemisebenzi yakhe yokufunda, uKelsey usebenzisa izindaba zakhe zokudla isikhathi eside, ehlola zonke izinto zobuciko be-fiber, edlala imidlalo yamasu webhodi, futhi echitha isikhathi nomlingani wakhe, ingane encane, nomxube waseDashi / umngcele we-collie mix.
UJoseph Cheatle unguMqondisi we-Writing and Media Center e-Iowa State University e-Ames, e-Iowa. Phambilini wayeyi-Associate Director ye-The Writing Center eMichigan State University futhi usebenze njengomxhumanisi oqeqeshiwe e-Case Western Reserve University futhi waba ngumeluleki wabafundi abaphothule eMiami University. Imiklamo yakhe yocwaningo yamanje igxila emibhalweni nasekuhloleni ezikhungweni zokubhala; ikakhulukazi, unesifiso sokwenza ngcono ukusebenza kwemikhuba yethu yamadokhumenti yamanje ukuze akhulume kahle kakhulu nakwizithameli ezibanzi. Ubeyingxenye yethimba labacwaningi ebheka imibhalo yesikhungo sokubhala ethola i-International Writing Centers Association Outstanding
UNeisha-Anne S Green (IYunivesithi yaseMelika) uyi-Faculty Fellow yoHlelo Oluhlukanisiwe lukaFrederick Douglass noMqondisi Wezinsizakalo Zokuxhaswa Kwezemfundo Nabafundi kanye Nesikhungo Sokubhala e-American University eWashington, DC. Usebenze njengomxhumanisi wokubhala, umxhumanisi wabafundisi, umsizi womqondisi kanye nomqondisi ohambisanayo. Ufundisa emakilasini ama-American University Experience 2 ahlukile e-American University. Lesi sigaba sakhiwe ubuhlakani be-AU, abasebenzi kanye nabafundi njengezwi lokubizela esenzweni ukuqinisekisa ukuthi ukwehluka, ukufakwa, ukukhuluma ngokukhululeka nenkululeko yokukhuluma kuyingxenye yohlelo lwezifundo oluyisisekelo. eBarbados naseYonkers, NY. Ungumlingani ohlale ephenya futhi ehlola ukusetshenziswa kolimi lwawo wonke umuntu njengomthombo osebenza kangcono ngokuzikhulumela yena nabanye. Ushicilelwe ku- Praxis futhi Ijenali Yokubhala; unezahluko ezizayo zezincwadi ku Imibono Nezindlela Zokufunda Zesikhungo Sokubhala: Umhlahlandlela Ongokoqobo, Isikhungo Sokubhala Esiphambanweni: Amazwi avela ku-Resistance futhi Izindlela Ezihlukahlukene Zokufundisa, Ukufunda, Nokubhala Kuzo Zonke Izifundo: IWAC eneminyaka engama-25. Unikeze amagama asemqoka ku-IWCA, IWAC kanye neBaltimore Writing Center Association. UNeisha-Anne ubuye asebenze encwadini yakhe ethi Songs From A Caged Bird.
U-Elizabeth Boquet (I-Fairfield University)unguProfesa wesiNgisi noMqondisi weSikhungo Sokubhala eFairfield University eFairfield, CT. Ungumbhali we Akukho ndawo eduzane nolayini futhi Umsindo ovela esikhungweni sokubhala futhi co-umbhali we Isikhungo Sokubhala Sansuku Zonke: Umphakathi Wokwenza, konke kushicilelwe yi-Utah State University Press. Usebenze amagama amabili njengo-co-editor we Ijenali Yokubhala, futhi uthola kabili ama-International Writing Centres Association Association Outstanding Research Award. Umfundaze wakhe uvele emaphephandabeni amaningi nakumaqoqo ahleliwe, kufaka phakathi IsiNgisi sasekolishi, Ukwakhiwa Kwekholeji Nokuxhumana, Ijenali Yokubhala, Futhi I-WPA: Ukuphathwa Kwezinhlelo. Ukungabonakali kwakhe kokudala kushicilelwe ku- Indaba Yezwi eyi-100, Abantu Abakhulile Ngokugcwele, Umakhelwane Omubi Omubi, Futhi Ukugcinwa Kwezindlu Okufile.